जो कोहिको यौन इच्छालाई कसरी बढाउने? (भिडियो सहित)
July 7, 2019 July 7, 2019 by साहारा संदेश
प्राकृतिक रूपमा सबै स्वस्थ व्यक्तिमा यौनेच्छा हुन्छ । भोक, निद्रा, प्यास जस्तै यौन पनि आवश्यक कुरा हो मानव जीवनका लागि । यो प्रकृतिले नै दिएको कुरा हो ।
यौनेच्छाको सञ्चालनमा विभिन्न प्रणाली सक्रिय देखिन्छन् । एकातिर रागरस अर्थात् हार्मोनहरूले यौनइच्छा सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कातिर इन्द्रिय प्रणालीका साथमा स्नायुप्रणालीले । यौनेच्छा जाग्ने (विकसित हुने) वा सोको व्यग्रतामा रागरस अर्थात् हार्मोनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । टेस्टेस्टेरोनले यौनेच्छा वा यौन व्यग्रतालाई बढी प्रभाव पारेको हुन्छ ।
तर धेरैले श्रीमतीलाई यौनइच्छा नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । महिलामा यौन उत्तेजना बढाउने कुनै चक्की वा औषधीको अपेक्षा गर्नु भने गलत हो ।
बरु केही उपाय छन् । जस्तै- श्रीमतीसँग कुराकानी गर्नुहोस् र त्यसैका आधारमा अघि बढ्नुहोस् । कतै यो समस्या शारीरिक कारणले हो वा मानसिक कारणले हो, निदान गर्नु पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । थकान, कुनै शारीरिक वा मानसिक तनाव छ भने त्यसलाई कम गर्न तपार्इंले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
यौनसम्पर्कमा पीडा हुने वा कुनै रोगव्याधि भए त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । तपाईंहरूको बीचमा भएको अपेक्षाको तालमेल नमिलेको हो भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न तपाईंलाई गाह्रो नपर्ला । तपाईंहरूको बीचमा मनोमालिन्य वा सम्बन्धमा कुनै तनाव छ भने त्यसलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
यौनसम्पर्कमा रुचि नहुने कुरा मानसिक कारणले भए त्यसैअनुरूप समाधान गर्नुपर्‍यो । यसका लागि तपाईंले चिकित्सक वा मनोचिकित्सकको सहयोग लिनुपर्ने हुनसक्छ । मानसिक समस्याका लागि मनोचिकित्सकको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि धैर्यता अनि दृढ अठोटको आवश्यकता पनि पर्ला । यस्तो स्थितिमा शंका-उपशंका अनि अन्य व्यक्तितिर सम्बन्ध विस्तार गर्न लागियो भने वैवाहिक जीवन थप असजिलोमा पर्छ । यस्तो स्थितिमा एक-अर्काको सहयोगको आवश्यकता हुन्छ ।
Prevयी ३ राशिहरु माथि भागुवान शिवले राख्छन सबै भन्दा बढी कृपा ! कमेन्टमा “ॐ” लेखी शेयर गर्नुहोस !
Nextतपाईंको मोबाइल अब सरकारको निगरानीमा आखिर किन पूरा जानकारी हेर्नुहोस